Mootummaan Wayyaanee EPRDF/TPLF/ Bulchiinsa waraanaan Oromiyaa shororkeessa kan jiruu humna Waraanaa Uummata Oromoo irra qubsiisee jiruun duula hidhaa jumlaa gaggeessaa jiraachuu Qeerroon gabaase . | QEERROO
Posted on March 17, 2016 by Qeerroo
Yakki ajjeechaa jumlaa(#genocide),hidhaa jumlaa fi dararaa fi shoroorkeessii waraana wayyaaneen ilmaan Oromoo irratt rawwatamaa jiru kun ilmaan Oromoo sirnicha keesatti sadarkaa waraanaa hanga hojjettoota siiviliitti jiran dachaan akka uummata isaanii cina dhaabbatanii fi sirnicha gananii keessa of baasuun lammii isaanii waliin falmatan godha jira. haaluma kanaan yeroo amma kanatti milishoota gandaa hanga poolisootaa fi kora bittinneessaa dabalatee ilmaan Oromoo caasaa waraana wayyaanee keessatti argamanitti rakkoon ulfaataan dhalachaa jira. Uummatni Oromoo mirga isaa fi bilisummaa dhugaa isaaf waan karaa nagaan falmateef akka malee ajjeefamuun, hidhamuu fi madeeffamuun sabaa fi sablamoota cunqurfamoo ollaa Oromiyaa ta’anii fi Oromiyaa keessa jiran illee kan warraaqsaatti galchee jiru ta’uun beekamadha. adeemsii kun immoo mootummaa wayyaanee kufaatii isa dhumaa fi ijibbaataan ga’ee waan qabee gadhiisuu wallaalee jira.